Izindatshana zikaJeff Beck Martech Zone |
Imibhalo nge UJeff Beck
UJeff uyiChief Executive Officer noMongameli we Izixazululo Zasekhaya Leaf, umhlinzeki oholayo wemikhiqizo yasekhaya - njengamawindi, ama-gutters, ukuphepha kwasekhaya, nokuningi. Ngokuhlangenwe nakho okungaphezulu kweminyaka engu-16 kwezimboni okugxile kubuchwepheshe bolwazi, ukusebenza, ukuphathwa kwamaphrojekthi, kanye nobuholi, u-Beck ushintshe ukusebenza kwebhizinisi langaphakathi, esebenzisa ubuchwepheshe obusha obukhuthaze isikali esingenakuqhathaniswa.
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 9, i-2021 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 9, i-2021 UJeff Beck
Unyaka odlule ube nomthelela kuzo zonke izimboni, futhi kungenzeka ukuthi usengcupheni yokuncintisana. Njengoba ama-CMO neminyango yezokumaketha iyalulama onyakeni wokusetshenziswa kwemali enesilinganiso, lapho utshala khona amadola akho wokukhangisa kulo nyaka angakubeka kabusha emakethe yakho. Manje yisikhathi sokutshala imali kwizisombululo zobuchwepheshe eziqhutshwa idatha ukuze uvule imininingwane engcono yokumaketha. Hhayi igumbi lokuphumula elihlanganisiwe elenzelwe izingcezu zefenisha ezingafani ezinemibala ekhethwe kuqala engqubuzanayo (izixazululo ezingekho eshalofini),